Alvaro Morata oo diyaar u ah inuu tartan lagalo weerarka Real Madrid ee BBC – Gool FM
Alvaro Morata oo diyaar u ah inuu tartan lagalo weerarka Real Madrid ee BBC
Liibaan Fantastic September 7, 2016
(Madrid) 07 Sebt 2016 Weerar yahanka kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata ayaa daaha ka qaaday inuu diyaar u yahay tartan uu lagalo weerarka kooxdiisa ee lagu magacaabo BBC.
Alvaro Morata oo ka soo laabtay suuqii xaggaaga kooxda Juventus oo uu ku biiray laba xiliciyaareed ka hor ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu tartan lagalo Bale, Benzema iyo Cristiano.
Morata ayaa ka codsaday tababare Zidane inuu sameeyo isbadal badan oo ku aadan shaxda kooxda si isaga iyo ciyaartoyda kaleba ay u helaan fursad ay ku ciyaaraan.
“Tartanku waa uu yaalaa koox walba laakiin Real Madrid tartanku waa mid wayn, riyadaydu waa guul aan la gaaro Real, haddii aanan hubin intaas ay dhici karto, waxaan iska aadi lahaa koox aan ka helayo boos joogto ah” ayuu u sheegay AS.
“BBC? seddexduba waa kuwo ka mid ah weerarka ugu fiican aduunka, laakiin marwalba waxaan u dagaalami doonaa inaan ciyaaro, arinkana aan ku adkeeyo tababaraha”.
“Waxaan ka rajaynayaa tababare Zidane inuu adeegsado isdaba marin waayo taasi waa wax muhiim u ah dhamaan ciyaartoyda, qaarkood waxay helayaan nasiino halka qaarka kale ay helayaan daqiiqado ay ku ciyaaraan”.
Xabi Alonso oo ka hadlay kulanka kooxdiisu ay ka horjeedo kooxda Schalke
Bastian Schweinsteiger oo la soo sawiray isagoo ka sii baxaya ALBAABKA dambe ee xerada tababarka Man United xilli ay xiddigaha kale…..+SAWIRRO